अध्यक्ष दाहालले मन्त्री पद खाली गरिदिनुस् भन्नुभयो भने दुई मिनेटमा राजीनामा दिन्छु : लेखराज भट्ट [अन्तर्वार्ता]- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
अध्यक्ष दाहालले मन्त्री पद खाली गरिदिनुस् भन्नुभयो भने दुई मिनेटमा राजीनामा दिन्छु : लेखराज भट्ट [अन्तर्वार्ता]
‘दुवै अध्यक्ष एक ठाउँ नबसे पार्टी एकता बच्दैन’
‘सबै समस्या एकता महाधिवेशनमा गएर टुंगाउनुको विकल्प मैले देख्दिनँ’
‘अध्यक्ष दाहालसँग मेरो सम्बन्ध बिग्रेको छैन’
श्रावण ९, २०७७ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षले नेकपाभित्र समूह र व्यक्तिका पनि समीकरण बदलिएका छन् । यस्तै समीकरण बदल्नेमा एक नेता हुन्, स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्ट । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री समेत रहेका भट्ट नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन नहुने पक्षमा छन् ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको झन्डै चार दशक लामो राजनीतिक र व्यक्तिगत सम्बन्ध भत्काएर भट्ट अहिले ओलीको पक्षमा उभिएका छन् । दाहालसँग अहिले भट्टको संवादहीनताको अवस्था छ । उनको तर्क छ–प्रधानमन्त्रीलाई हटाइयो भने मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ । उनले पार्टीभित्रका सबै समस्या महाधिवेशनमा लगेर हल गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद र समाधानको विकल्पका विषयमा मन्त्री भट्टसँग गरिएको कुराकानी :
सरकार र पार्टीबीच तालमेल मिलेको हुनुपर्छ । कसरी मिल्छ भने सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ र उहाँको नेतृत्वमा मन्त्री छौं । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रीलाई कसरी राख्ने उहाँको अधिकारभित्र हुन्छ । पार्टीसँग पनि सुझाव लिएर अगाडि बढ्नु हुन्छ, भइरहेको पनि छ । तर, अहिले केही असन्तुष्टि देखिएका छन्, स्थायी कमिटीमा पनि देखा पर्‍यो । विवाद भए विचार र संगठनको पक्षको गहिराइमा जान जरुरी छ । अहिले विचारभन्दा पनि मान्छेहरु आत्मकेन्द्रीत स्वार्थमा छन् । के पाए के पाइनँ भन्नेतिर छन् । पार्टी एकता हुँदा कुनै मतभेद आए छलफलबाट टुंग्याउने भन्ने छ । तर, अहिले बहुमत र अल्पमत भन्नु एकता समझदारी भन्दा बाहिर हो । महाधिवेशन भएर एकल अध्यक्ष भइसकेपछि बल्ल बहुमत र अल्पमत हुन्छ । पूर्व माओवादी एक ठाउँ हुने, पूर्व एमाले एक ठाउँ हुने भनियो भने भागबण्डा ६०/४० छ । त्यसरी पूर्व माओवादी अल्पमतमा भइरहन्छ । एकताको अर्थ हुँदैन, टुट्छ । यतिखेर बहुमत अल्पमत भन्ने हैन । एकतालाई बचाउने मुख्य हो । त्यसमा हस्ताक्षरकर्ता दुई अध्यक्ष एक ठाउँ हुन जरुरी छ ।
सबैका आ–आफ्ना सोच र दृष्टिकोण हुन्छन् । हिजोका विरासत पनि होलान् । मन्त्री कुन गुटमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको भिजन, दृष्टिकोण, पार्टीको घोषणापत्रमा केन्द्रीत भएर नीति कार्यक्रम आए–आएनन् भन्ने मुख्य हो । कार्यान्वय गर्ने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हो । पुल्चोकभित्र मेरै कसैसँग त्यतिधेरै ‘इन्टिमेन्सी’ छैन । म कुनै गुटमा छैन । मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको नीति निर्देशनमा चल्नुपर्छ । पर्दापछाडिबाट नीति निर्देशन लिनेबेला हैन । प्रधानमन्त्रीमार्फत् आउनुपर्‍यो । अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता र स्थायी कमिटीका सदस्यहरु हुनुहोला । उहाँहरुका समस्या होलान् । प्रधानमन्त्री मार्फत निर्देशन आयो भने सजिलो हुन्छ ।
हिजो एकता हुँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले तपाई पाँच बर्ष प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, जनताले पनि नेकपालाई पाँच बर्षका लागि म्यान्डेड दिए । उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव लड्यौं । यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई बदल्नु भनेको देशलाई अस्थितरतातिर लैजाने हो । फेरि देश नयाँ–नयाँ गठबन्धन र लेनदेन तिर जान्छ । स्थायीत्व रहन्न । अहिले सरकार बदल्ने भनेको एकता प्रक्रियालाई ब्रेक गर्ने हो । हस्ताक्षरकर्तामध्ये एउटा अध्यक्ष बाहिर जाने हो भने एकता टुट्छ । अरुका व्यक्तिगत महत्वकांक्षा अलग हुन् । पहिलो राष्ट्र हो, जनता हुन् । जनताको पक्षमा उभिन जरुरी छ । दुवै अध्यक्ष एक ठाउँ नबसे पार्टी एकता बच्दैन । सरकारलाई बलियो नबनाई एकता बच्दैन । अहिले प्रतिपक्षीभन्दा पनि पार्टी भित्रैबाट सरकारको आलोचना भएको छ, यो पार्टीको निम्ति आत्मघाती हो ।
सरकारको कार्यसम्पादन र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर उहाँको राजीनामा मागिएको छ । राजीनामा माग्ने प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहबारे तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?
अहिले राजीनामा माग गर्नु असान्दर्भिक हो । दुवैजना पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हो । उहाँहरुका कार्यशैली पनि देखेको हो । सरकारमा हुँदा गरेको काम जनताले बुझेका–देखेका छन् । प्रधानमन्त्रीका कार्यशैली कहाँ मन परेका छैनन् भने बसेर छलफल गर्ने र सच्चाउन लागाउने हो । सरकारले गरेका राम्रा काम सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएका छन् । अहिले लगत्तै के आयो र राजीनामा माग्नु भयो ? नियत राम्रो होला राजीनामाको परिणाम कस्तो आउँछ, देशले के भोग्नुपर्छ भन्नेतर्फ जानुपर्छ । नियत राम्रो भएर मात्र हुँदैन । परिणाम राम्रो आउँदैन । समय सान्दर्भिक भएन ।
तपाईंकै पार्टीका कतिपय नेताहरुले लेखराज भट्ट मन्त्री पद जोगाउन प्रधानमन्त्रीसँग नजिक छन् भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् नि ?
निकास निकाल्नको लागि वरिपरि भएका सबैले सकारात्मक सोच राख्नु पर्छ । एकता अहिलेको मुख्य विषय हो बोध गराउन जरुरी छ । कसैले छुट्टै पार्टी बनाउँछु, नेता हुन्छु भन्ने सोचबाट गयो भने वाम आन्दोलन विर्सजनतिर जान्छ । त्यता कल्पना पनि गर्नुहुँदैन । बहुमत अल्पमतबाट टुंगो लगाउनु पर्छ भन्नेले पनि एकतामा जोड दिनुपर्छ । आम जनता, कार्यकर्ताको चाहना एकता जोगाउनु पर्छ भन्ने छ । त्यो भावनालाई दुवै अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतालगायत स्थायी कमिटीका सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । पार्टी कुनैपनि हालतमा टुट्न दिनुहुन्न ।
मुख्यत दुई अध्यक्ष हुन् । त्यसपछि वरिष्ठ नेतासहित सचिवालयका र अलि अलि हामी पनि हौं ।
बैठकले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन् । बहुमत अल्पमतमा पनि जान सकेको छैन् । अहिलेको विवाद समाधानको संकटमोचक सूत्र अझै भेटिएको छैन् । तपाईं व्यक्तिगत रुपमा कस्तो सुझाव दिनुहुछ, जसले नेकपाको अहिलेको विवाद हल गर्न सकोस ?
हामीले मूल एजेण्डाबाट बहस डाईभर्ट गर्‍यौं । सीमा समस्या र समाधान एजेण्डामा धेरै सकारात्मक छलफल भईरहेको थियो । भारतलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले के बोल्नु भयो । त्यहाँबाछ बैठक डाइर्भट गरियो र त्यहिँबाट समस्या सुरु भयो । एजेण्डा अर्न्तगत विविध पनि थियो । प्रधानमन्त्रीको केही कमजोरी त्यसमै राखेर छलफल गरेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यहाँ गलत नियतका साथ छलफल डाईभर्ट गरियो । अब अरु एजेण्डाभन्दा कोभिड–१९ र प्राकृतिक विपत्तिको एजेण्डामा छलफल गर्नुपर्छ ।
तर, नेकपालाई देश र जनताको चिन्ता भएजस्तो त देखिदैंन । घर झगडाले सरकारको कामकारबाहीसमेत पूरै प्रभावित भएको देखिन्छ, तपाईंहरुले महशुस गर्नुभएको छ कि ?
तपाईंले चार दशकभन्दा लामो समय दाहालसँग नजिकबाट सहकार्य गर्नुभयो । यतिसम्म कि जनयुद्ध शुरु गर्न भनेर पेस्तोल दिनुभयो । तर, अहिले पुरानो मित्रता तोडेर मन्त्रीका लागि तपाईंले धोका दिनुभयो भन्ने गुनासो दाहालका नजिककाबाट सुनिन्छ, केही प्रतिक्रिया छ कि ?
दाहालसँग तपाईंको पछिल्ला संवाद कहिले भयो ?
उहाँले छलफल गरौं भन्नु भएको छ । स्थायी कमिटीमा छलफल भई नै रहेको छ । त्यहाँ भेटघाट भएको छ । पहिले समस्या समाधान होस्, त्यसपछि जाने आउने त भइरहन्छ । उहाँसँग सम्बन्ध टुट्ने भन्ने हुँदैन । सम्बन्ध नै तोडे भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ । उहाँसँग चार दशक भयो सहकार्य गरेको । उहाँलाई थाहा छ मैले कहिलै पद चाहियो भनिनँ । मेरो आवश्यकता पार्टीमा छैन भने भनिदिनु पर्‍यो । सामाजिक काम गरेर बसौंला । जनताको काम गर्न पार्टी चाहिन्छ भन्ने हैन । ईच्छाशक्ति हुनुपर्छ । ममा त्यो ईच्छाशक्ति छ ।
प्रचण्डले पनि कुरा सुन्नु हुन्छ । निर्णय आफैं गर्ने हो । अर्को अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि कुरा सुन्नु हुन्छ । निर्णय उहाँलाई जे सही लाग्छ त्यहीँ गर्नुहुन्छ । हरेक नेतृत्वले गर्ने त्यही हो । राम्रा सुझाव लिने र ठीक छन् भने ग्रहण गर्ने हो । तलसम्मका विचार लिएर केन्द्रीकृत गर्ने दुवैमा छ । केपी ओलीलाई नजिकबाट बुझ्न सकेको छैन, भर्खरै हो । मन्त्री भएको हुँदा क्याविनेट बैठकमा भेट्छु । पछिल्लो चरणमा सरकारका कामकाज, पार्टीका समस्यामा उहाँले बोलाउँदा म गएको छु । मेरो स्वभाव म आफैं आउँछु भनेर कँहि जादिनँ । बोलाएपछि जान्छु ।
सहमतिको विकल्प छैन । सहमति भएन पार्टी भित्रै नेतृत्वविरुद्ध र सचिवालय विरुद्ध अर्को विद्रोह हुन्छ । त्यो स्थिति नआवोस् भन्न अध्यक्षहरु, वरिष्ठ नेताहरु अलि गम्भिर हुन जरुरी छ । तलबाट कार्यकर्ताले विद्रोह गर्न थाले पार्टीको निम्ति दुर्भाग्य हुन्छ ।
प्रकाशित : श्रावण ९, २०७७ १७:३१
लकडाउन हटाइएपछि लिबाङमा चहलपहल
श्रावण ९, २०७७ काशीराम डाँगी
रोल्पा — असार ३ गतेदेखि रोल्पा सदरमुकाम लिबाङमा लगाइएको लकडाउन शुक्रबारदेखि स्थगित भएपछि चहलपहल बढेको छ । एकै दिन १३ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि स्थानीय प्रशासनले लकडाउन गरेको थियो ।
शंकास्पद व्यक्तिहरुको पीसीआर नतिजा नकारात्मक देखिएपछि सदरमुकाममा लगाइएको लकडाउन स्थगित गर्ने निर्णय शुक्रबारको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले गरेको हो । एक सातादेखि लगाइएको बन्दाबन्दी अन्त्यपछि स्थानीय बजार खुलेका छन् भने यातायातका साधन चल्न थालेका छन् । सिल गरिएका दुई वटा गाउँमा चलहपहल सुरु भएको छ । तर प्रशासनले शैक्षिक संस्था, ठूला उद्योग संचालन, खेलकुद आयोजना तथा भेला हुने खोलाका धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधिमा भने रोक लगाएको छ ।
कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै प्रशासनले ती दुई गाउँका करिब ५ सय जनालाई घरमै बस्न एक साताअघिदेखि निर्देशन जारी गरेको थियो ।
विदेशबाट आएकामा पीसीआर परीक्षण गर्दा १३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि ती दुई गाउँसँगै सदरमुकाममा लकडाउन गरिएको थियो । लिबाङमा आपतकालीनबाहेक सबै गतिविधिमाथि रोक लगाइएको थियो । ‘शंकास्पद व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण नदेखिएपछि लकडाउन फिर्ता गरिएको हो’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रकुमार रानाले भने । कोरोना संक्रमित १३ जनाको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका विश्वास गरिएको अन्य २० जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा नतिजा नकारात्मक भएपछि अवस्था सहज बनाइएको प्रशासनले जनाएको छ । गुरुङ गाउँका एक जना र धबाङका १२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । हाल सबैलाई चिकित्सकको हेरचाहमा आइसोलेसनमा राखिएको छ ।
हालसम्म रोल्पामा ७८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।